Nice: Miatrika ny Herisetran’ny Zava-nitranga · Global Voices teny Malagasy
Nice: Miatrika ny Herisetran'ny Zava-nitranga
Voadika ny 01 Aogositra 2016 3:31 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français
Fanomezam-boninahitra an'i Nice avy amin'i @jeanlucr tao amin'ny twitter
Raha toa ka mbola teny amin'ny làlana ” Promenade des anglais” ireo faty vao,izay indrisy fa loza tsy tokony ho nisy, tamin'ity indray mitoraka ity dia nampian'ireo adihevitra taorian'ny fanafihana tao Frantsa ho fanampin'ny tsy fahamatorana ny fahafaham-baraka. Tsy misy intsony mihitsy ny fotoana fisaonana. Na dia ny minitra kely fiatoana mba nanome fitempoana kely ho an'ny fihetsehampo aza. Nampidinina ho an'ny toeran'ny isa sy tsy toy ny olona ny aina tsirairay nafoy, avela ho an'ireo gazety ny fitantànana ny hamariparitra ny fiainan'ireo maty novonoina, anaty fangorahana fahazarana fotsiny. Satria, vao tsy ela akory, teo amin'ny godoraon'i Nice izay mbola nikarepodrepohan'ireo vatana sy ny tahotra, tranga mampalahelo iray no nibahana tao antsaintsika indray: ireo fanadihadiana, famerenana fanadihadiana sy tombatombana ampiasàna ny media, izay mendrika tao anaty faharatsiana ireo adihevitra tao amin'ireo tambazotra sosialy ary ny fahambanian'ny saranga politika izay manivaiva ny any anaty lavaka tsy hita noanoa. Nanomboka tamin'izay ny dihin'ny mpitia faty, ireo fifandirana maharikoriko mikasika izay mpamaritoetra ho entina milaza ilay famonoana. Hetsika nataon'ny olona tsy ampy saina sa fampihorohoroan'ny silamo ? Ny tena marina dia manafina ny tsy fahazoan'aina ny fivoahana tampoky ny fanontaniana toy izany. Làlambe iray mogodana no misokatra, ireo fakofakonà vinavina tena aompana tanteraka amin'ny zavatra iray, izay ahitàna finiavana ny hamerina fifandirana mba hialàna ny tena zava-mitranga marina. Fanontaniana izay vao maika ratsy satria raha zohiana, tsy mamaly an'iza na iza, na inona na inona. Tsy ny silamo ve? Misy ireo misento fa afaka enta-mavesatra mihitsy. Olona tsy salama saina ? Manala ny hamehana amin'ny zavatra mitranga izany, toa efa kely sisa dia afaka sahady tamin'ilay olana isika ; farany, nibaby sy niantsoroka ny vinavinan-dresaka rehetra ihany ny sehatry ny « hadalàn'ny » olona, izay tena mety. Manakaiky ny fetran'ny tsy fahazoan'aina isika, izay ahilika amin'ny alàlan'ny fanoherana ny fitoriana isika ny tena marina, ny tsy fanekena, ary raha mihitatra ho tena ratsy, ny « firaisana tsikombakomba ».
Ny tsy fanekena voajanahary
Ny fottra niandohan'ny ady amin'ny fampihorohoroana any Frantsa araka ny nilazàna azy, sy araka ny filentehany rehefa nandeha ny fotoana, eo anelanelan'ny vesatry ny fahatsapàna ho diso tamin'ny fanjanahantany sy ny jeopolitika, ary ny tsy fanekena tanteraka ny olon'ny finoana amin'ny fomba nentin-drazana sy ny firehana noho ny resaka ideoljia, dia mamotika ny efitry ny fisaintsainana. Tsy noho ny fitiavana hahazo fanazavana marim-pototra mihitsy raha toa isika ka mihizingizina ny tsy hahita afa-tsy fanehoana adalàna any anatin'ireo vondrona na olona lian-drà, rantsan'ny rafitra politika sy fivavahana tena saro-takarina, voazava amin'ny alàlan'ny fanilikilihana ara-tsosialy, ny fahalemena, ny tsy fahampiana ara-tsaina sy ara-panehoam-pitiavana. Finiavana ny « hanadio » fivavahana iray io, izay isian'ny tsy fahazoan'aina hita taratra sy azo tsapain-tànana. Tamin'ny fanombohan'ireo karazana tranga feno rà nikapoka an'i Frantsa tato ho ato, izay i Merah no nanasonia ny fiantombohan'izany zavatra mampalahelo izany, nifikitra tamin'ny fihetsehampo manokana isika, mba hialàna amin'ny fandavahana hatrany ireo zavatra efa marefo, ary tonga milaza hoe « tsy nisy nidiran'ny silamo izany » Na teo aza ireo zava-doza nahatsiravina nisesy, mbola miteny ihany « tsy nisy nidiran'ny silamo izany ». Fitotonganana lehibe fa tsy hoe araka ny zavatra tiana ho lazaina ihany, hatramin'izay zava-doza tany Nice izay, mbola iny ihany isika nilaza hoe « tsy nisy nidiran'ny silamo mahery fihetsika izany ». Mifandray amin'ny faminanian'ny « rienavoirisme » (tsy misy idirany) ny rohy hita amin'io fivoarana io. Akorontan'io fomba fijery ny zava-mitranga io ny zavatra rehetra, hatramin'ny fampiasàna ireo teny. Ka noho izany, amin'ny mpampihorohoro, miresaka ny « mpamono», ny « fankahalàna », ny « kamiao adala » isika. Sahala amin'ny hoe tsy misy antony, na mandrisika azy, ny fankahalàna ; ny mpamono, ho hafatra ; ny kamiao, ho mpanofa. Sahala amin'ny hoe mitahiry tanjona ao anatiny manokana fotsiny ny fampihorohoroana… Natao hilazàna ny toetra rehetra manana endrika ideolojika ny endriky ny amboadia mandeha irery, entina milaza ny zavatra tiana holazaina teo aloha, saingy efa simban'ny tsy fieritreretana ihany koa.
Ideolojia : fanompoana sy fiovàna zotra.
Ny tena marina dia mitampify anaty zavatra mahamenatra na tsy misy fahatsiarovantena ny ratsy. Toa tsy mety, ho an'ny maro, ny mieritreritra hoe manerana ny tany, misy ireo olona aminà karazana toerana ara-tsosialy rehetra, foko rehetra, avy amin'ny tantara rehetra, miombona amin'ny ideolojia mpandevilevy izay mibaiko sy manome aingam-panahy hamono amin'ny anarany. Mahita olona maro amin'ny làlana alehany, io ideolojia mihoatra ny fefy rehetra io, ka manome vatana sy mampitsangana indray tamin'ny maty ireo hevitra rehetra misy heloka bevava, na manaitaitra azy. Tsy araka ireo hevitra efa nifanekena, mifampizara hevitra iarahana aminà vondrona maro tsy hay visavisaina momba ny toeran'ireo vitsy an'isa sy ny silamo any andrefana, io ideolojia io. Noho izany, mahazo olona mora foana izy ao amin'ny tany iray rafetin'ny fankahalàna sy lonilony. Ary mba hiroboroboana, milaza tena ny fitantaràna ny resaka silamo ho mpitondra tenin'ireo silamo tratry ny faneriterena, izay omeny fanampiana. Ka izany no isian'ny fampiasàn'ireo sasany ny herisetra, izay lazaina ho azo ekena, ho toy ny fiverenana voajanahary. Ka na silamo mpampihorohoro ny anaran'io elatra iray io, na mamotika ny sivilizasiôna manontolo sy ny harenany ao anatin'ny asidrany, na hoe manindrahindra sahady tontolo iray anjakan'ny sekta any amin'ireo faritra rehetra efa azony. Mihitatra any ivelany ary manintona io ideolojia manana tohana ara-bola tsy manam-paharoa io, miandry kendry tohana ny fizarazaràna jeopolitika, ny fahantrana ara-piarahamonina, mba hanelezana ny poiziny. Mikolokolo hatrany ny fotoana rehetra azony araraotina hanaovan-javatra toy ny orinasa politika rehetra, mitazona ny diariny manokana sy ny fahitàny manokana ny zava-misy malaza izy. Araka izany dia miparitaka eo ambonin'ny fahapotehana izy, amin'ny fahakingàna, any anatin'ny fanampiana noho ny maha olona, ny rariny ara-piarahamonina, toy ny ohatra omen'ny fikambanan'ireo rahalahy silamo. Tsy amin'ny herisetra mandrakariva araka izany. Fa amin'ny fitaizàna izay mampifangaro ny otri-po, fihorenan-tsaina, fanohanana ny fikomiana ary fikolokoloana ny ratra navelan'ny fanjanahantany. Izay no itovizany. Fa ireo elatra tena mahery fihetsika dia manome toerana ambony ny herisetra, mamon'ny tantaran'ny finiavana hambabo tamin'ny fotoanan'ny mpaminany fahiny. Amin'ny familiana ny hafatra koranika na ny fikatsahana ireo andalana-tsoratra masina lian-drà, arahana fanondroana ara-pinoana. Tsy fanekena voajanahary, izay mlaza ny hakelezan'ny fandinihana, ny fifikirana hilaza hoe tsy misy idiran'ny silamo mihitsy ny zava-miseho.
Mood #prayfornice pic.twitter.com/l9m4EZznIp
Fanalavirana ny tsy fahazoan'aina
Tsy hoe fanomezan-tsiny ireo silamo mihitsy ny resaka, izay zakain'ireo mpino sasany ny tsy fitiavana feno fankahalàna silamo izay iadiana tsy an-kitsitsy. Fa resaka fanipihana hoe misy ady ara-ideolojika ao anatin'ny silamo, ka tsy mila ho maro an'isa akory ireo mahery fihetsika, mba ho mpanimba zavatra. Fibabohana ny tsy fahavitàna mandresy lahatra ny fampiasàna herisetra. Ny fihazakazahana hilaza ny tsy maha meloka « ny silamo», izay tsy vondron'olona, dia taratry ny tsy fahazoana aina ao anaty, sy azo vinavinaina any anatin'ireo silamo maro, voan'ny hoso-potak'io haratsiana io. Miparitaka any amin'ireo sasany amin'ny alàlan'ny fanamelohana io tsy fahazoana aina io, ilay lazaina ho mpankahala silamo. Amin'ny fandavana ny fifampidiran'ny olana, mamorona ny zavatra hatahorana indrindra isika, sahala amin'ny hoe midika fanondrotondroana ireo silamo ny filazàna ny ideolojia silamo. Raha toa ka maro ny antony, ary manosika ny tena tsy hifikitra amin'ny zavatra iray ny fanetrentena, tsy misy antony hanesorana ny mety ho fisian'ny resaka ara-politika na fivavahana mihitsy amin'ilay olana.
Milaza ilay tsy fahazoana aina izany, ny fahalainana manameloka, izay ivavahana mihitsy aza hoe tsy misy idirana antokom-pivavahana mihitsy ilay zava-nitranga. Noho izany, ho an'ireo vondrona mpikatroka eo amin'ny fiarahamonina sy ara-pivavahana, ho fizaràna ny vinavina miaraka amin'ireo mpampihorohoro io, namana ratsy indrindra izay na inona na inona ireo tanjona, mampikorontana sy mandiso ny seraserany ara-politika. Ao no mipetraka ny tsy fahazoana aina, lasa diso ny tantara rehetra raha toa ka hita marina fa misy ifandraisany ireo fampihorohoroana sy ireo vondrona silamo. Mba hanalavirana io tsy fahazoana aina io, miparitaka ny fandavana, ny fanoherana ny fitoriana amin'ny fieritreretana dieny mialoha ny zavatra hitranga, ohatra, manohitra ireo vondrona kely havanana izay vonona ny hiatrika. Fa ihany koa, ireo fiteny mahazatra milaza fandavana : ny fifkirana amin'ny zavatra iray sy ireo hafa mba hanosehana ny tena marina. Izay mora kokoa noho ny miatrika ny herisetran'ny tena zava-mitranga.
Nosoratan'i Elgas, senegaly iray mpanao gazety sy sosiology, ity lahatsoratra ity.
2 andro izayEspaina
1 herinandro izayPaortiogaly